के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक – Krazy NepaL
February 14, 2021 4584
काठमाडौँ । आजकलको दौडधुँपको जीन्दगीमा हामी आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिदैनौ । जसको कारणले पछि हामीलाई नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मानिस आफ्नो तौललाई घटाउन चाहान्छन् । आफ्नो तौललाई कम गर्न कैयौँ खर्च गरेर जिम गई पसीना बगाउछन् ताकीँ तौल घटोस् तर जति गरेपनि तौल घट्नेको नाम नै लिदैन ।
आउनुहोस् घरमै बसी बसरी तौल घटाउन र कम्मर लाई पनि सानो बनाउन सकिन्छ त
महिलाहरुलाई आफ्नो मोटो भद्धा फिगर लाई लिएर चिन्ता लाग्छ । यस्तो अवस्थाामा महिलाहरु दिनरात बस् यही बारेमा सोच्छन् । कि आफ्नो बढेको पेटको बोसो कसरी घटाउने र आफ्नो फिगरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले आफ्नो काममा पनि फोकस गर्न सक्दैनन् । जसको कारणले उनीहरुलाई अरुको धेरै कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
आज हामी तपाईलाई एक खास ड्रिंक लिएर आएका छौ जसलाई पिइसकेपछि तपाईको फिगर मेन्टेन गर्ने, पेटको बोसो घटाउने समस्या बिना मेहेनत नै घटाउन सकिन्छ । तपाईलाई यो ड्रिंक पिइएपछि धेरै समय कुरिराख्न पर्दैन केही दिनमा नै यो समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ ।
यो भनौं कि यदि तपाईं यो यो ड्रिंक निरन्तर पिउनुहुन्छ, भने ३६ को कम्म्रलाई केही दिनमै २६बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईंको फ्याट पनि हट्नेछ । तर तपाईंले पूर्ण ध्यान राख्नु पर्छ कि तपाईंले कुनै दिन पनि नबिराई यसलाई पिउनुपर्छ, ताकि तपाईं यसको प्रभाव छिट्टै देख्न पाउनुहुनेछ ।
यसको प्रभाव तपाईमा परिसकेपछि पनि यो ड्रिंक निरन्तर पिउनुहोला । नत्र फेरी समस्या आउन सक्छ । त्यसोभए आउनुहोस् जानौ त्यो ड्रिंक कसरी बनाउने त ?
ड्रिंकको लागी आवश्यक सामाग्री
यो ड्रिंकको लागी तपाईले मात्र २र ३ चीज प्रयोग गर्नसक्नुहुनेछ । आउनुहोस् जानौँ यो बनाउनको लागी के चाहिन्छ त ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
२ १ इन्च अदुवा
सबैभन्दा पहिले एउटा कागतीलाई छोटो छोटो स्लाइसमा काट्नुहोस्, यसपछि अदुवा बोक्रालाई फाल्नुहोस् ताँकी कागती र अदुवा सजिलैसँग मिक्सरमा पिसिओस् ।
त्यसपछि २ गिलास पानीलाई उमाल्नुहोस् र त्यसमा अघि पिसेको कागती र अदुवा हाल्नुहोस् । र २ मिनेटसम्म चलाइराख्नुहोस् जसले कगती र अदुवा पानमिा राम्रोसँग घुल्न पाउँछ ।
यसपछि यो आधम तयार हुन्छ
अब यस ड्रिंकलाई १ २ मिनेटको लागी राख्नुहोस्, यसपछि यसलाई छान्नुहोस् ताकी ड्रिंक पिउदा तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो हँदैन । ध्यान दिनुहोस् कि यसलाई चिसो भएपछि मात्र छान्नुपर्छ ।
अब यस ड्रिंकमा एक चम्चा मह हाल्नुहोस् , महले स्किनलाई सफा बनाउँछ । यसले पेटको बोसोलाई घटाउँछ । अब ड्रिंक तयार भयो तपाईले यसलाई बिहान पिउनसक्नुहुन्छ किनकी बिहान पिउँदा ज्यादा फाइदा हुनछ ।
अब तपाई सोच्नसक्नुहुन्छ कि आखिर यस ड्रिंक पिउदा के फाइदा हुन्छ त ?
त्यसोभए जाननुहोस् कि कागतीले भद्धा मोटोपनलाई कम गर्छ । त वही यसको पानीले तपार्यको शररिलाई मेन्टेन गर्छ । भने वही अदुवाले तपाईको स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा यी सबै चिज एकै साथ मिक्स गरेर पिउँदा झन् तपाईको सबै समस्या छिनभरमै गायब हुन्छ ।
Prevहोचो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अप्नाउनुहोस् मात्र यी ५ उपाय
Nextकमै व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यस्तो रेखा, जो हुन्छन् निकै भाग्यमानी
नेपालकै अ’नौठो मन्दिर हेर्नुहोस, बत्ती बालेर सन्तानको बरदान दिने, मागेका सबै कुरा पुरा हुने विश्वास पूरा पढ्नुहोस्